Efa tamin’ny 2004 no nandramana najoro ny faritra fa hatramin’ny androany dia mbola ilay rafitra tetezamita nolazaina fa haharitra roa taona tany am-boalohany ihany no mbola ampiharina. Ary raha marina ny feo mandeha, mikasika ny fanendrena ny governora hitantana ny faritra, dia rafitra tsy mifanaraka amin’ny hevitra fonosin’ny Lalàmpanorenana no antitranterin’izany. Ny hevitry ny Lalàmpanorenana mantsy dia ny hahatonga ny faritra ho ny ambaratonga faharoa amin’ny vondrombahoakam-paritra. Tamin’ny 2014, ny fanamafisana ny didy aman-dalàna momba ny fitsinjaram-pahefana dia tokony ho nanome lanja ny fanatsarana kokoa ny fiasan’ny vondrom-bahoaka miaraka amin’ny fanohanana avy amin’ny filankevitry ny distrika sy ny sampan-draharaha teknika efa naparitaka, araka ny voalazan’ny lalàna 2014-21 tamin’ny 27 septambra 2014 mikasika ny fisoloana tena ny Fanjakana. Raha tsy misy ny fanapariahana marina ny fahefana sy ny toekarena dia tsy hisy fampandrosoana eto Madagasikara. Notsindrian’ny SeFaFi fa ny tena maika indrindra dia ny fametrahana azy amin’ny lalambỳ tsara ka ahafahany mirimorimo ohatra ny TGV...